Cimilada Waxay Soo-jeedinaysaa Adeegga Kaydinta Webka
The sawirada webka waxaa loola jeedaa in laga soo saaro macluumaadka laga helo boggag kala duwan iyo si fudud u socodsiinta hawsha. Waxaa lagu sameeyaa Python, Java, Ruby, C ++ iyo luqado kale oo barnaamijyo ah waxaana sidoo kale loo yaqaan 'extractors data'. Halkan waxaan ku wadaagnay liis dhamaystiran ee ugu wacan shabakadda shabakada ee barnaamijka internetka.
Warshadku ma aha oo kaliya warshad shabakadeed laakiin sidoo kale qalab dhamaystiran oo SEO ah. Waxay ku haboon tahay shirkadaha SEO, freelancers, iyo websaydhka; Qaar ka mid ah sifooyinka gaarka ah waa raadinta mashiinka raadinta, goosashada macnaha muhiimka ah, goosashada ra'yiga, faallaynta faallooyinka, iyo isku xirka xidhiidhka. Waxaa intaa dheer, qalabkan wuxuu hubinayaa bogga darajada, wuxuu abuuraa RSS feed, wuxuu xayeysiisaa cinwaanada emailka, wuxuu raadiyaa domiyo aan diiwaangashaneyn, wuxuuna qabtaa shaqooyin daraasiin ah. Warshadku wuxuu ku habboon yahay isticmaalka shakhsiyeed iyo xirfadba.
Soo dejinta. Io:
Barnaamijkan daabacaadda ee shabakada ayaa muddo ku dhowaa. Soo dejinta. io wuxuu kuu ogolaanayaa in aad bogagga bogagga u rogto API ku haboon oo kaliya dhowr jeer oo fiidiyow ah. Waxay kuu fududeyneysaa inaad macluumaad ka qaadato websaydhka. Waxay leedahay muuqaalo fara badan oo isku marna isku duubi kara goobaha isku dhafan iyo fudud.
iMacros waa mid ka mid ah xog-bixiyeyaasha ugu wanaagsan ee internetka. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad soo uruuriso iyo xogta xoqidda sida shuruudahaaga. Tijaabooyinka qalabkan iyo soo-ururinta qoraalka, sawirrada, iyo fiidiyoowga. Iyadoo iMacros, waxaad ku dhejin kartaa ama ku dhoofin kartaa macluumaadka faylasha XML iyo CSV. Waxay ku habboon tahay ganacsatada iyo shirkadaha isla markaana waxay sameeyaan hawlo kala duwan isla waqti isku mid ah.
Dukaamadu waa mid ka mid ah adeegyada ugu caansan ee webka. Waa mashiinka sare ee webka, oo loo isticmaalo qaabeynta iyo abaabulidda macluumaadka bogagga iyo blogyada kala duwan. Qaar ka mid ah shaqooyinka ugu caansan waa falanqaynta xogta, macdanta macluumaadka, iyo kaydka taariikhiga ah. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad ka faa'iideysato API-ga si fiican loo qeexay oo shaqadaada ayaa sahlan.
Mozenda wuxuu ku habboon yahay ganacsiyada yaryar, dhexdhexaadka iyo kuwa waaweyn. Waa buug-yaraha bogga awoodda badan leh oo ka soo baxa bogaga internetka oo si habboon u socda. Iyada oo Mozenda, waxaad ururin kartaa oo u habayn kartaa macluumaadka si habboon. Nashqadiisu ay ku xirantahay dariiqa ayaa ah mid si deg-deg ah loo geliyo, iyo heerkul-qiyaasta ilaa xad. Waxay u baahan tahay dayactir waxayna samayn kartaa shaqooyin badan saacad.
PromptCloud waxaa loo yaqaanaa shabakadeeda iyo qaabka ay u kiciso. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku uruuriso oo aad ka xoqdo xog badan oo ka timid ilo badan oo ka badan 130 luqadood. Xogta waa la badbaadin karaa ama lagu soo dhajin karaa dariiqaaga adag ee isticmaalka offline. Waxaad bartilmaameed u noqon kartaa boggaga internetka, mawduucyada doodaha, goobaha warbaahinta bulshada iyo warbaahinnada qalabkan. PromptCloud wuxuu u dhaqmaa sidii ciriiri awood leh wuxuuna si joogto ah u muujin karaa bogaggaaga bogagga si aad u falanqayn kartid mashiinka raadinta.
ParseHub waxaa shati bixiya Debuggex, Inc. Waa mid ka mid ah adeegyada ugu fiican, awoodda badan ee caanka ah. Kordhinta kumbuyuutarkan waxaa loo adeegsadaa in ay noqoto goobo firfircoon oo loo gudbiyo macluumaadka la akhrin karo oo la qaadi karo. Barnaamijyada iyo horumariyeyaasha, qalabkan wuxuu si buuxda u ilaaliyaa qaabka xogta.
WinAutomation waxaa shati bixisay Softomotive Ltd. Waa qalab dhammaystiran oo qalabaysan oo kuu oggolaanaya inaad automated u sameyso hawlaha soo noqnoqonaya. Waxay ka dhigtaa soo saaridda xogta, iyo shabakadda websaydhku waxay u fududahay oo waxay bixisaa natiijooyin sax ah. Qalabkani waa mid cusub oo leh sifooyin badan: waxaad kaydin kartaa xogta la soo rogay faylka Excel ama Google Drive si sahlan. Waxaad sidoo kale u dhoofin kartaa xogta XML, RSS iyo qaababka JSON Source .